Andrianampoinimerina dia mpanjaka malagasy tao Imerina izay nanjaka tamin'ny taona 1787 hatramin'ny taona 1810. Andriamiharamanjaka no rainy ary Ranavalonandriambelomasina no reniny. Nanambady maro izy ka isan'izany Rabodonimerina, Rasendrasoa, Rambolamasoandro ary i Miangaly. Tsy fantatra marina ny fotoana nahaterahany fa ny nahafatesany dia tamin'ny taona 1810. Radama I zanany no nandimby azy.
1 Ny nahaterahan’Andrianampoinimerina
1.1 Ny zava-nisy momba ny fanjakana talohan'ny hanjakany
1.2 Ny renin'Andrianampoinimerina
1.3 Ny fahaterahany
2 Ny endriny sy ny toe-batany
2.1 Lehilahy fohy
2.2 Mazava hoditra
3 Ny nitazaina azy
4 Ny nahazoany ny fanjakana sy ny nanitarany izany
4.1 Saika Ralaitokana no nanjaka
4.2 Tafapetraka ho mpanjaka ihany
4.3 Niezaka nampiray ny tany nanjakany
4.4 Fanitarana ny fanjakana
4.5 Vokatry ny fanitaram-panjakana
5 Ny anarana nisalorany
6 Ny toetsainy
6.1 Saro-piaro tamin'ny fanjakany
6.2 Olon'ny fisokafana amin'ny samy Malagasy
6.3 Olon’ny toekarena Andrianamponimerina
6.4 Olon'ny fahamarinana sy ny fikirizana
6.5 Tia vehivavy: vady, reny, anabavy, sns
7 Ny zava-bitany
8 Ny niafarany
Ny zava-nisy momba ny fanjakana talohan'ny hanjakanyHanova
Raha tsiahivina, dia fanjakana iray tsy mivaky Imerina hatramin’ny mpanjaka Ralambo (1575-1610) ka hatramin’ny mpanjaka Andriamasinavalona. Nozarain’Andriamasinavalona tamin’ny zanany efa-dahy ny faritry ny fanjakany ka nisy fanjakana 4 teto Imerina dia teo Antananarivo, Ambohidrabiby, Ambohimanga ary Ambohidratrimo izay samy nanana ny renivohiny avy. Nifandrafy ireo fanjakana merina 4 ireo ka voatelin’ny fanjakan’Ambohimanga ny an’Ambohidrabiby ka telo sisa dia ny fanjakan’Ambohimanga, ny fanjakan’Imerinatsimo (nanana an’Antananarivo ho renivohiny) ary ny fanjakan’Ambohidratrimo. Ireo fanjakana merina ireo nohodidinin’ireo fanjakana tsy merina dia ny fanjakan’Anjozorobe tao avaratra sy avaratra antsinanana, ny fanjakan’Andratsay tao atsimo, ireo fanjakan’ny Bezanozano tao atsinanana, ny fanjakan’Imamo tao andrefana atsimo ary ny fanjakan’i Vonizongo tao andrefana avaratra. Na dia niadiady aza ireo fanjakana merina 3 ireo dia tsy nisaramianakavy fa nifanambady ny ankohonan’ireo mpanjaka tao amin’izy ireo mba hitazomana ny hasin-drazana sy ny fihavanana.
Fony Andriambelomasina (1730-1760) no nanjaka teo Ambohimanga, dia nisy fifanatonana teo amin’ny fanjakany sy ny fanjakan’Anjozorobe izay marihina fa tsy isan’ny fanjakana merina sy nanana an’Andriamiharamanjaka ho mpanjakany. Tamin'ireo zanany ampolony maro dia akaikin'ny fon'Andriambelomasina kokoa Andrianjafy zanany lahimatoa sy Ranavalonandriambelomasina zanany vavy matoa. Koa nomen'Andriambelomasina ho vadin’Andriamiharamanjaka i Ranavalonandriambelomasina mba hitandrovana ny fahalemana amin’ny fanjakana roa tonta ary hiatrehana ny ady amin’ny fanjakan’Imerinatsimo sy Ambohidratrimo. Vadikely anefa Ranavalonandriambelomasina satria Andriamiharamanjaka efa nanana vadibe talohan’izany.
Nanaraka sy nitoetra tamin’Andriamiharamanjaka vadiny tany Anjozorobe Ranavalonandriambelomasina ary nitoe-jaza taminy. Rehefa akaiky ny andro hahaterahany dia nananainga Ranavalonandriambelomasina hiteraka any amin’ny ray aman-dreniny eny Ambohimanga. Saingy teny andalana, raha mbola tsy tafavoaka ny fanjakan’Andriamiharamanjaka akory dia nihetsi-jaza Ranavalonandriambelomasina ary niteraka teo an-dalana. Ikaloy no niantsoana io toerana niterahany io ary Andrianampoinimerina ilay zaza naterany. Arak’izany, Andriamiharamanjaka mpanjakan’Anjozorobe no rain’Andrianampoinimerina. Manila zanak’Anjozorobe avy amin’ny rainy ary manila merina avy amin’ny reniny Andrianampoinimerina fa tsy merina madio akory. Marihina anefa fa Andriamiharamanjaka dia manila ihany koa satria isan'ireo razambeny sy razan'andriana nanjaka tamin'ny faritr'Anjozorobe dia ireo Andriamamilaza sy Andriandoriamanjaka izay samy niainga avy eo Ambohidrabiby ary tarana-dRabiby no niverina nankany Anjozorobe.
Manodidina ny taona 1720–1730 ny taona nahaterahan’Andrianampoinimerina satria i Mayeur, frantsay nivahiny tao amin’ny fanjakan’Andratsay ny taona 1777, dia nirakitra tamin’ny diariny ny filazan’ny olona nohadihadiany fa Andrianampoinimerina mpanjakan’Ambohimanga dia antidahy. Raha apetraka ary fa efa antidahy Andrianampoinimerina tamin’ny taona 1777 nanoratan’i Mayeur dia efa mahatratra 50 taona farafahakeliny Andrianampoinimerina tamin’ny taona 1777. Vava Alahamady amin’ny volana Alahamady kosa no voalazan’ny lovantsofina fa andro nahaterahany.
Ny endriny sy ny toe-batanyHanova
Tsy azo sary Andrianampoinimerina satria norarany tsy hiakatra an’Imerina ny vahiny. Ny lovantsofina anefa dia mitazona fa lehilahy fohy fa tsy lava Andrianampoinimerina. Araka ny filazan’ireo mpitazona tantara momba ny fandrian’Andrianampoinimerina ao amin’ny lapany atao hoe "Mahandrihono" ao amin’ny rovan’Ambohimanga dia sahabo ho 1,45 m ny halavan’Andrianampoinimerina. Ary farany, i Mayeur dia nanoratra tamin’ny taona 1777 tao amin’ny diariny fa araka ny notaterina taminy dia fohy Andrianampoinimerina mpanjakan’Ambohimanga.
Momba ny fihodirany dia tsisy sary ahafahana mamantatra izany. "Ilahifotsy" anefa no niantsoan’Andriambelomasina raibeny azy. Midika izany fa fotsy fihodirana na mazava hoditra Andrianampoinimerina. Mbola ny hafa-draibeny manao hoe "Ilahifotsy avy amin’alahamadintany no tompon’ny farany" no nentiny nandresy lahatra ny vahoakan’Ambohimanga raha naka ny fanjakana tao Ambohimanga Andrianampoinimerina satria mantsy mitovy volonkoditra sy fiaviana amin’ny voalazan’Andriambelomasina izy (fa raha tsy fotsy izy no tsy avy amin’ny alahamadintany dia ho mpisandoka fotsiny ihany). Manarak’izany, Radama I zanaka naterak’Andrianampoinimerina dia olona fotsy fihodirana na mazava fihodirana, malama volo, maranitr'orona fa tsy mangamanga sy ngita volo, no tsy manana endrika afrikana. Inoana arak’izany fa tsy mifanalavitra loatra amin’ny endri-dRadama I Andrianampoinimerina rainy. Ary farany, nisy sary vita hosodoko momba an’Andrianampoinimerina, sary izay mampiseho fa olona fotsy na mazava fihodirana, maranitr'orona ary lavalava endrika izy. Misy moa ny milaza fa tsy tena endrik’Andrianampoinimerina no hita amin’ilay hosodoko. Ny tsy azo lavina anefa dia hatramin’ny nahavitan’izany sary hosodoko izany dia maro ireo taranak’Andrianampoinimerina no nitazona dika mitovy amin’izany, eny hatrany anaty rovan’Antananarivo sy Ambohimanga ary amin’ny rova maro amin’ny vohitra 12. Midika izany fa saika noeken’ny maro ho manakaiky tanteraka ny endrik’Andrianampoinimerina iny sary hosodoko mahakasika azy iny.
Ny nitazaina azyHanova
Kamboty reny fahazaza Andrianampoinimerina ka teo anilan-drainy tany Anjozorobe izy no nitoetra. Tsy zanaky ny vadiben’Andriamiharamanjaka moa izy no tsy mba nisy reny hihantahantana ka tamin’ny fahazazany dia efa nahakarakara tena sy nahay nitady vola ary nampiasa ny herin-tsandriny izy. Ny manarakandro, ny miasa tany, ny kilalaontsaina, ny tafasiry amin’ny antitra, ny mikarakara ireo zandriny iray tampo aminy, ny mitsidika ireo vohitra manan-tantara ary ny mihaino kabary an-dapa no nandaniany ny antokonandrony fa tsy mba liana tamin’ny fanaon’ireo zaza sy tanora mitovy taona aminy izy.
Rehefa henon’Andrianjafy anadahin-dreniny, Andrianjafy izay efa nanjaka nandimby an’Andriambelomasina teo Ambohimanga ary Andrianjafy moa tsy niteraka rahateo, ny nahazo an’Andrianampoinimerina dia nalainy ho any aminy eny Ambohimanga izy izay hany havany akaiky. Koa nandao an-drainy Andrianampoinimerina ary tonga nonina teo Ambohimanga ka nankinin’Andrianjafy tamin’ireo loholona teo Ambohimanga ny fitaizana azy. Na dia teo Ambohimanga aza dia mbola notohizan’Andrianampoinimerina hatrany ilay toetrany mahakarakara tena sy be atao.
Ny nahazoany ny fanjakana sy ny nanitarany izanyHanova
Saika Ralaitokana no nanjakaHanova
Vavahady avaratra ao amin'ny vohitra masina Ambohimanga
Tsiahivina ny hafatr’Andriambelomasina fony fahavelony fa rehefa modimandry izy dia Andrianjafy no manjaka ary aorian’Andrianjafy kosa dia Ilahifotsy avy amin’Alahamadintany zafikeliny no manjaka. Nankato tanteraka ny hafa-drainy Andrianjafy fony izy nihevitra fa momba izy, koa nankininy tamin’ireo loholona teo Ambohimanga ny fitaizana an’Andrianampoinimerina nandrandrainy handimby azy rahatrizay. Tato aoriana anefa dia niteraka an-dRalaitokana i Andrianjafy ka novoriny ny vahoaka ary nilazany fa Ralaitokana no hanjaka aoriany. Tezitra tamin’Andrianjafy ireo loholon’Ambohimanga izay efa nifankahazo am-po tamin’Andrianampoinimerina.
Tafapetraka ho mpanjaka ihanyHanova
Nohararaotin’ireo loholona ireo ny tsy nahateo Ambohimanga an’Andrianjafy hanandratany ho mpanjaka an’Andrianampoinimerina sy hakana ny fon’Ambohidrabiby sy ny vohitra miaraka aminy. Koa nandefa iraka teroa Ambohidrabiby Andrianampoinimerina handresy lahatra an'Ambohidrabiby sy ny vohitra manodidina hiandany aminy sy haka lamba jaky tenomin'Andriandoriamanjaka hotafiany amin'ny fanandratana azy ho mpanjaka.Tsy nanaiky Ambohidrabiby raha tsy natao Menabe sy tsy alaimbodihena koa noeken'Andrianampoinimerina izany. Ny Andriandoriamanjaka kosa nampitondra lamba jaky ireo irak'Andrianampoinimerina mba hatafy ity farany ho mariky ny maha mpanjaka azy. Vao tafiditra teo Ambohimanga ireo iraka dia nasain’ny loholon’Ambohimanga nohidiana ny vavahadin’Ambohimanga ary natafin’izy ireo an’Andrianampoinimerina ny jaky noentin’ireo iraka sady napetrak’izy ireo miaraka amin’ny mpanotrona maro teo Ambatomiatendro Andrianampoinimerina ary natao fararano ny fanapoahana basy sy dobok’aponga sy sodina. Teny an-dalana hody ho any Ambohimanga Andrianjafy no nilazana fa efa natsangan’Ambohimanga ho mpanjaka Andrianampoinimerina. Tsy nino izany izy fa niroso hatrany ny diany ka afaka an’Ambohitrandriamanjaka izy no nahatazana an’Andrianampoinimerina eroa Ambatomiatendro miavaka amin’ny jaky tinafiny izay mbola mazava loko tsara satria vaovao ka fantatr’Andrianjafy fa efa lasan’Andrianampoinimerina Ambohimanga ary Ambohidrabiby koa. Hany hery, nitodi-doha nankeny amin’ny lafin-kavany eny Ilafy Andrianjafy no nanozona an’Ambohimanga.
Niezaka nampiray ny tany nanjakanyHanova
Arak’izany, tamin’Ambohimanga sy ny manodidina no nanjaka Andrianampoinimerina. Ambohidrabiby sy ny vohitra miaraka aminy moa dia nanaiky niandany taminy rehefa nataony tsy alaimbodihena sy menabe. Ilafy sy Andrianjafy kosa mbola nanohitra azy ka niadiany ka resiny. Natambany ho tokon’Avaradrano, zokin’Imerina 6 toko ireo. Tsy fantatra marina ny taona nanombohan’Andrianampoinimerina nanjaka tao Ambohimanga fa efa talohan’ny taona 1777 nivahinianan’i Mayeur tao Andratsay izany ka hatramin’ny taona 1787. Rehefa izany, na dia teo aza ny fifamitram-pihavanana nifanaovan’izy sy Andrianamboatsimarofy mpanjakan’Imerinatsimo tamin’ny fanambadiana dia ady no niafaran’izy roalahy ka resy sy nandositra any Imamo Andrianamboatsimarofy (fa tato aoriana izy vao nafindra nafenina tao Antsahadinta).
Nozarain’Andrianampoinimerina ho toko roa Imerinatsimo mba tsy hatanjaka intsony, dia tokon’ny Vakinisisaony sy tokon’Ambodirano ka nalainy vady ny maro tamin’ny Zanak’andriana teo Alasora ka nisy napetrany teo Antsahadinta fa izy kosa nanao lapa hitoerany teo Antananarivo.
Fanitarana ny fanjakanaHanova
Mahandrihono, lapan'ny Mpanjaka Andrianampoinimerina ao amin'ny Rovan' Ambohimanga.
Rehefa izany, dia nanoa an’Andrianampoinimerina ny fanjakan’Ambohidratrimo izay nanolotra andRambolamasoandro ho vadiny ka nataony ho toko iray dia Marovatana izany. Ary ny fanjakana madinika maro tamin’ny tany antsinanan’Ambohimalaza dia nanoa azy na dia nanohitra mafy aza ny tao Ambatomanga ka lasany hatramin’ny fanjakana bezanozano amin’ny faritry Mantasoa. Nataony isan’Avaradrano ireo fa tato aoriana vao natao ho Vakiniadiana. Rehefa izany dia nitarin’Andrianampoinimerina miakandrefana ny fanjakany ka nanoa azy ny fanjakan’Imamo, izay nataony isan’ny tokon’Ambodirano. Nanoa koa ny fanjakan’ny Vonizongo ka nataony toko iray dia Vonizongo.
Rehefa izany dia nitariny nianatsimo ny fanjakany ka nanoa azy mora foana Andriamanalinibetsileo mpajakan’Andratsay. Dia nitariny nianatsimo amin’ny Betsileo ny fanjakany ka Ilaidama (Radama I) vao 20 taona monja no nasainy nitaritafika ka resy i Rivoekembahoaka mpanjakan’i Fisakana sy Andrinaompanalina mpanjakan’Ambositra Sahasomangana; nanoa azy Andrianantara mpanjakan’ny Manandriana sy Andriamanalina III mpanjakan’Isandra sy Raonimpanarivotomponony mpanjakan’ny Lalazana sy Andriambavizanaka mpanjakan’i Lalangina sy Rarivoarindrano mpanjakan’Arindrano. Natambany ho tokon’ny Vakinankaratra ireo fanjakan’Andratsay sy Betsileo. Mbola navelany hitondra ny anaram-boninahitra mpanjaka anefa ireo mpanjaka nanoa fa Radama I no nilaza tany Fianarantsoa fa tsisy mpanjaka intsony amin’ny fanjakany eto Madagasikara afatsy izy ihany fa zanak’andriana no anaram-boninahitra isaloran’ireo mpanjaka nanoa azy. Nandritra izany, ny fanjakan’Anjozorobe dia efa ireo zanaky ny vadiben’Andriamiharamanjaka no nanjaka tao ary izy ireo tsy nety nanoa an’Andrianampoinimerina koa notafihan’ito farany izy ireo ka lasany ny ampahany amin’ny faritry ny fanjakan’Anjozorobe ka nataony ho isan’Avaradrano. Tsy fantatra mazava anefa ny sisin-tany amin’ny fanjakany sy ny fanjakan’Anjozorobe fa dia namporisihiny ny vahoakany hianavaratra mihoatra ny reniranon'i Mananara araka izay tratra.
Vokatry ny fanitaram-panjakanaHanova
Arak’izany, niainga tamin’ny faritra kely indrindra Andrianampoinimerina ka tonga lehibe indrindra ny fanjakany, ary izy no mpanjaka voalohany nahatafaray ny fanjakana merina hatramin’ny andro nizaran’Andriamasinavalona izany ho fanjakana efatra. Nataony enin-toko Imerina.
Raha tsiahivina dia talohan’ny taona 1787 (ary efa talohan’ny taona 1777) no efa mpanjakan’Ambohimanga Andrianampoinimerina ary teo ny renivohitry ny fanjakany nisy ny lapany natao hoe Mahandrinono. Tamin’izany, ny andriana fito toko dia tsy mba nomeny zaratany teo Ambohimanga satria tsy noeken’ Ambohimanga izany, fa dia ireo terak’Ambohimanga (na andriana na hova na mainty) efa tompontany teo ihany sy ireo olona avy amin’ny lafy valo nampiakarin’Andrianampoinimerina taty Imerina (ireo mpanandro, mpisikidin’andriana, ombiasa) sy ny mpiambin’andriana ary ny vady amanjanak’Andrianampoinimerina no nonina teo Ambohimanga.
Ny taona 1787 ka hatramin’ny taona 1810 kosa no namoriany an’Imerina sy nampanekeny ireo fanjakana maro hafa ka ny rovan’Antananarivo no renivohitry ny fanjakany izay nisy ny lapany atao hoe "Mahitsielafanjaka". Ireo tranokotona nitoeran’ny ankohonana sy fianakaviana akaiky an’Andrianampoinimerina no nanodidina ny lapa tao androvan’Antananarivo. Teroa ambany avaratry ny rova kosa, manodidina an’Andohalo dia nisy faritra nohodidininy hadivory ka fianakaviana notsongainy avy amin’Andriatompokoindrindra, Andriandranando, Andrianamboninolona, Andriamasinavalona, Andriandoriamanjaka, Raberanto ary Zazamarolahy no namponeniny tamin’izany faritra voahodidina hadivory izany. Teo atsimon’ny rova kosa no nametrahany ny Voromahery mpiambina azy. Tsy noekeny hisy loholona hova sy mpanandro sy mpimasy nonina teo akaikin’ny rovan’Antananarivo. Fa ny sisa amin’ny andriana sy hova ary mainty enin-dreny amin’Imerina enin-toko dia samy nomeny zaratany saingy ivelan’Andohalo sy tamin’ny faritra manodidina ny vohitr’Antananarivo azon’izy ireo honenana. Izany fizaran-tany izany no tsy itovizan’Antananarivo sy Ambohimanga.
Ny anarana nisaloranyHanova
Mahitsielafanjaka, lapan'ny Mpanjaka Andrianampoinimerina ao amin'ny Rovan'Antananarivo
Mpanjaka nitondra anarana betsaka indrindra Andrianampoinimerina. Tamin’ny fahazazany dia Imboasalama no anarana niantsoan’ny lafindrainy azy tany Anjozorobe fa farariana izy noho izy vitan’Alahamady. Ilahifotsy kosa no niantsoan’Andriambelomasina sy ireo lafindreniny azy teny Ambohimanga. Vao nanjaka teo Ambohimanga izy dia nisalotra ny anarana Andrianampoinimerina, nentiny nampangina ireo andriana merina madio izay nanenjika azy ho manila merina sy mpisandoka fahefana ary koa hanehoany ny maha zafind-Rangorinimerina azy, ary ny vadibeny dia nantsoiny hoe Rabodonimerina.
Noho izy manana toe-tsaina mpitarika, tsy mifidy tany hiadiana, sahy manao dingana lehibe ho amin’ny fanovana, manana vinam-piarahamonina, hendry, mahalala ny pitsony amin’ny fanjakany, mikendry hatrany ny fampandrosoana ny fanjakany sy ny vahoakany ary miaro ny harem-pireneny sy ny vahoakany amin’ny hafetsen’ny vahiny dia nantsoin’ny vahoakany sy ireo fanjakana manodidina tamin’ny anarana hoe Ny Ombalahibemaso izy.
Saro-piaro tamin'ny fanjakanyHanova
Olon’ny fitiavan-tanindrazana sy ny firaisampirenena : "Ny ranomasina no valamparihiko", izany no teny filamatra napetrany entiny nanehoany ny finoany fa foin’Andriananahary ho fanjakany ny Nosy iray manontolo. Na dia tsy tanteraka aza izany dia efa nanaiky azy ny ampahatelon’ny faritr'i Madagasikara ary natahoran'ny fanjakana maro sisa izy talohan'ny fodiamandriny. Ambonin’izany, navahan’Andrianampoinimerina tsara ny teraky ny Nosy sy ny vahiny (arabo, vazaha, sinoa, karana, afrikana).
Noheverin’Andrianampoinimerina fa hametsifetsy ny vahoakany sy hanangona ny harena eto an-toerana fotsiny no ahatongavan’ireo vahiny (arabo, eropeana, indiana, sinoa, afrikana) ka noferan’Andrianampoinimerina fa hatreo Ambatomanga sy Betafo ary Maevatanana no azon’ireo vahiny hiakarana sy tsidihana raha avy any amorontsiraka sy avy any atsimo hoany ankibon'Imerina izy ireo. Ny Malagasy kosa, dia ny Sakalava, Betsileo, Betsimisaraka sy ireo foko hafa mponina amin’ny Nosy, dia navelan’Andrianampoinimerina hiakatra an’Imerina satria noheveriny fa ny lafivalon’ny Nosy no fanjakany ka vahoakany no niheverany azy ireo na dia hafa foko aza.
Fantatr’Andrianampoinimerina koa fa hamotika ny vahoaka ny toaka sy fomban’ny vahiny koa nofehezin’Andrianampoinimerina tamin’ny sainy ny vahoakany ka novoriany ny vahoaka ary nalainy ny omby velona nampibobohany toaka ary nasainy norasainy ka indreo ny atin’ny omby masaky ny toaka ka niaiky ny vahoaka fa ratsy ny fomba vahiny.
Olon'ny fisokafana amin'ny samy MalagasyHanova
Olon’ny fisokafana : Voalohany, amin’ny lafiny firazanana dia maro ireo hova sy olona avy amin’ny fanjakan’Anjozorobe, Imamo, Vonizongo, Andratsay, Betsileo, Sakalava, Antemoro, sns izay nankasitrahany no nataon’Andrianampoinimerina ho isan’ny Zanadralambo, Andriandranando, Andrianamboninolona, Andriamasinavalona ary Zazamarolahy. Niteraka fahatezerana teo amin’ny andriana merina madio izany saingy gadra lava no sazy miandry ireo andriana merina madio ireo raha nanohitra izany ka tsisy sahy nivolana imaso. Nipetraka ho tarazo tamin’ireo mpanjaka nandimby azy izany fisokafana izany, ka Radama I dia nanana vady sakalava, Ranavalona I dia niteraka tamin’Andriamihaja hova, Ranavalona I dia nanangana zaza avy amin’ny fanjakan’Andratsay ary Ranavalona II sy Ranavalona III ary Rasoherina dia vadin’ny praiministra izay hova. Faharoa, teo amin’ny raharaham-panjakana koa dia nanao fisokafana tamin’ny foko hafa sy ny hova merina izy ka saika ireo olona avy amin’ny foko hafa sy hova merina no nanodidina azy tao androvan’Ambohimanga Ohatra, Ratendro sy Rabefiraisana taranak’andriana avy any Imamo no lehiben’ny mpanandrony sy mpanolotsainy. Nodidiany àry fa izay hanjaka handimby azy dia tsy maintsy miditra ao amin’ny tranon-dRabefiraisana eo Ambohimanga aloha. I Hagamainty sy i Hagafotsy hova koa no isan’ny mpanolotsainy. Ary rehefa notaterina taminy fa ny mpanjakan’Andratsay sy ireo mpanjakan’ny Betsileo tao atsimon’ny fanjakany dia nampiasa Anakara dia nampiakatra Anakara avy any Vohipeno izy ho ombiasiny sy hampianatra sorabe ireo zanany ka ireo Anakara ireo dia to teny taminy. Fahatelo, teo amin’ny fanambadiana koa dia nanohy ny fisokafana efa nataon’Andriambelomasina raibeny izy satria ireo zanany tamin’ireo andriambavy merina ampolony maro dia nampanambadiany zanakandriana tamin’ny foko hafa manodidina an’Imerina. Inoana fa ilay maha manila merina-Anjozorobe azy no nahatonga an’Andrianampoinimerina tsy nanana olana amin’ny fisokafana sy fifandraisana amin’ny foko sy firazanana hafa.
Olon’ny toekarena AndrianamponimerinaHanova
Olon’ny toekarena: “Izaho tsy manampahavalo afa-tsy ny mosary” hoy Andrianampoinimerina. Noezahiny ho mandry ny tany ary notolorany angady ny isan-dahy ka nasainy namboly ny olona. Rehefa izany dia nanisy tsena iray isan-kerinandro sy isam-bohitra izy ka nitobaka ny vokatra, resy ny mosary ary voky ny vahoaka. Satria vory maro ny olona isaky ny tsena koa nataony andro sy toerana nampitàna ny hafany ny andro tsena ary kabary no anaovan’ireo irak’andriana izany.
Olon'ny fahamarinana sy ny fikirizanaHanova
Olon’ny fahamarinana: “Ny fanjakana tsy ananako havana, hoy izy, ka rehefa vandana dia kary". Tsy tiany ny kolikoly sy ny tsy marina. Tsy nanavahany io fa na dia ireo vady amanjanany sy iray tampo aminy aza dia maro no nokendaina sy natao sesitany raha nikasa ny hiakadapa na hanohitra azy.
Olon’ny fikirizana: Na teo amin’ny lafiny ara-tafika, na fambolena na fotodrafitrasa na fitiavana sy maro hafa dia olona be kiry Andrianampoinimerina ka tsy navelany raha tsy azony izay ilainy. Toy izany, raha hariva nandrotsa-bary iny izy tao androvan’Antananarivo no nahatsiaro sakay dia naniraka olona haka pilokely teny Ambohimanga ka voaloatra ny vary tonga ny pilokely. Toy izany koa, manina an’i Miangaly izy ka tsy navelany raha tsy iny maizim-bava vilany izy nanainga teo Antananarivo ary nandry tamin’i Miangaly tany Manjakandriana ny halina iny ihany. Ary raha nisy vohitra notafihiny nanohitra azy dia tsy navelany fa notafihiny sy nataony fahirano tsy ankiato ka nanaiky azy ny farany.
Olona tia tsidi-bohitra sy mamangy havana: Tsy mba mahatafatoetra ao an-drova Andrianampoinimerina fa dia mitsidika ny tanàna sy vohitra sy lohasaha sy fantsakana maro amin’ny fanjakany, tsy mba ho fialamboly fa fitiavana mifanerasera mivantana amin’ny vahoakany ahalalany ny olana sy vokatra ary ny tantarambohitra ka maro ireo vatolahy sy anarantanàna ary loharano saika nifamatotra tamin’ny nandalovany.
Tia vehivavy: vady, reny, anabavy, snsHanova
Olona tia vehivavy: Nomen'Andrianampoinimerina lanja sy anjara manokana teo amin'ny fiainany ny vehivavy. Voalohany, ampolony maro ny vadiny ka misy ny tena tiany ary misy kosa vadim-panjakana ho fitandroana fahalemana. Tany amboalohany dia Rabodonimerina no vadibeny ary nampitoeriny tao Ambohimanga saingy tsy niteraka izy ireo. Nony niamboho Rabodonimerina dia Rasendrasoa zanak'Andriamanitrirazaka taranak'Andriampolofantsy no lasa vadibeny ary napetrany tao Ambohidrabiby. Faharoa, ny lapa Mahandrihono ao Ambohimanga izay misy azy dia ahitana sary nono eny akaikin'ny tapenaka izay tazan'ny masony raha mitsilany matory eo ampandriany izy.
Fasan'i Rabodozafimanjaka vadin'Andrianampoinimerina ao amin'ny Rovan'Antsahadinta
Fahatelo, nanana lanja manokana taminy ny anabaviny sy ny reniny ary ny renibeny ka noferany fa ny tera-dRangorinimerina renibeny sy ny tera-dRalesoka anabaviny ihany no mahazo manjaka mandimby azy. Ankoatr'izany, navahany manokana ny vehivavy mananotena izay nomeny alalana haka kitay amin'ny alany. Ary farany, nofaritany fa mitondra Radama I nefa an'ny vehivavy ny farany dia an'i Mavo izany izay nisalotra ny anarana Ranavalona izay nalaina avy amin'ny anarana Ranavalonandriambelomasina renin'Andrianampoinimerina.
Tsisy nisy nahavita izay vitan’Andrianampoinimerina tamin’ny mpanjaka rehetra teto Madagasikara talohany. Izy no nampanaiky ny fanjakana maro nanodidina an’Ambohimanga sy Imerina. Matsilo saina izy satria tsy mba nahita ranomasina izy satria na dia nonina taty anivon-tany dia fantany fa Nosy i Madagasikara ary tokony ho fanjakana tokana fa tsy mizarazara. Izy no Rain’ny fampivondronana ho fanjakana tokana an’i Madagasikara.
Raha nitaratra tamin’ny loharano teroa Ankatso izy dia hitany fa efa atomotra ny fodiamandriny ka nanafatra izy fa eny Ambohimanga no hafenina izy noho io vohitra io iafenan'ireo lafinkavany akaiky azy. Fa ireo andriana miafina tamin'ny fitomiandalana teo androvan'Antananarivo dia misy razany ny sasany saingy lavitra kokoa. Tratra antitra Andrianampoinimerina ka ny taona 1810 izy no niamboho ary nafenina teo atsimon’Andriambelomasina raibeny ao an-drovan’Ambohimanga. Tato aoriana anefa, raha vao voazanaka i Madagasikara dia tsapan’ny mpitondra frantsay fa mbola maro ireo Malagasy nino ny hasin’ny razan’andriana koa nafindran’ny Frantsay ho ao androvan’Antananarivo ny taolambalon’Andrianampoinimerina.
Ny taona 2008, tamin’ny fitondran’i Marc Ravalomanana no tafaverina ao amin’ny rovan’Ambohimanga ny taolambalon’Andrianampoinimerina. Niteraka resabe anefa izany famindrana izany satria tao ny tsy nankasitraka noho io famindrana io natao mangingina, raha niteraka fankasitrahana kosa hoan'ny hafa izay nihevitra fa voavaha ny famonjàna ara-tantara ny firenena malagasy nataon'ny mpanjanatany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Andrianampoinimerina&oldid=969717"
Dernière modification le 27 Martsa 2019, à 04:55
Voaova farany tamin'ny 27 Martsa 2019 amin'ny 04:55 ity pejy ity.